थाहा खबर: बाबुरामलाई भेट्न पुगेका प्रचण्डले राखे पार्टी एकताको प्रस्ताव
(Tuesday, 19 June, 2018)
बाबुरामलाई भेट्न पुगेका प्रचण्डले राखे पार्टी एकताको प्रस्ताव
| ४४ हप्ता अघि
फोटो : प्रचण्डको सचिवालय
साउन २८, २०७४
काठमाडौं : शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न पुगे। पिसाबथैलीको अपरेसन गरेर हालै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई टोखास्थित एक घरमा आराम गरेर बसेका भट्टराई र प्रचण्डबीच करिब दुई घण्टा कुराकानी भएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
प्रचण्डको सचिवालयले २ घण्टा लामो छलफलमा दुई नेताबीच समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा कुराकानी भएको बताएको छ। भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व माओवादी र अग्रगामी धाराहरु बीचको एकतामा जोड दिँदै त्यसका लागि गम्भीर रुपले सोच्न नेता भट्टराईलाई आग्रह गरेका थिए। प्रचण्डको सचिवालयले भनेको छ 'अध्यक्ष प्रचण्डले देशको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई विचार गरेर माओवादीहरु एक हुनैपर्ने कुरामा जोड दिँदै सम्पूर्ण राजनीतिक परिस्थितिमा समीक्षा गरेर जान आफूहरु गम्भीर रहेको नेता भट्टराईलाई जानकारी गराउनुभएको थियो।'
प्रचण्डको प्रस्तावमा भट्टराईले भने प्रष्ट जवाफ दिएका छैनन्। उनले समग्र विषयमा समीक्षा गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउँदै त्यसका लागि छलफललाई जारी राख्ने प्रस्ताव गरेका प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। प्रचण्डको वेवसाइटमा प्रकाशित विवरणमा लेखिएको छ 'दुई नेताबीच समग्र विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न छलफललाई जारी राख्ने समझदारी भएको छ।'
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका नेताहरु रामचन्द्र झा र रामकुमार शर्मा केही दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किएका छन्। त्यस्तै नेताहरु देवेन्द्र पौडेल सुनिलसहितका १५ नेताले पनि काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी विघटनतिर गएको बताएका थिए। माओवादीबाट आएका नेताहरु फेरि पुरानै पार्टीमा फर्किने प्रक्रिया थालेका बेला प्रचण्डले भट्टराईलाई फेरि एक हुन प्रस्ताव गरेका हुन्।
हाम्रा सपना पूरा भएका छैनन्, संघर्ष जारी छ : मन्त्री मगर
काठमाडौं : खानेपानीमन्त्री बिना मगरले शहीद र बेपत्ता नागरिकका सपना अझै पूरा नभएको बताएकी छन्। उनले अझै पनि लडाइ जारी रहेको बताएकी छन्। ...
सरकारमाथि खनिए प्रदेशसभा सदस्य
हेटौँडा : प्रदेश ३ का प्रदेशसभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि कमजोर आएको भन्दै प्रदेश सरकारमाथि खनिएका छन्। यसरी विरोधमा गर्नेमा प्रति...
राष्ट्रियसभामा ‘लक्की ड्र’ : गृहमन्त्रीले ६ वर्षको चिट्ठा थुत्दा अर्थमन्त्री ‘अनलक्की’, कुन सदस्यको कार्यकाल कति? (सूचीसहित)
काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको पदावधि टुंगो लागेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गोलाप्रथाबाट पदावधि टुंगिएको हो। गोलाप्रथा अनुसार १९ जन...
प्रदेश १ को बजेट : पाँच वर्षमा एक हजार ५०० मेगावाट विद्युत्
विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि प्रस्तुत बजेटमा प्रस्तुत गरेको छ। उक्त बजेटमा केही नयाँ विषय समावेश ...
बजेटको विरोध गर्ने सत्तारुढ सांसदलार्इ ओलीले लगाउन खोजे लगाम
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारी ढुकुटी बलियो नभएको अवस्थामा बजेट ल्याइएकाले त्यस मर्मलाई ब...
इङल्यान्डका ह्यारी चम्किँदा ट्युनिसियाले जवाफ फर्काउने 'टाइम' पाएन
अर्थ विधेयक पारित, जग्गा खरिदसम्बन्धी कर निर्धारण
प्रदेश ७ मा बजेटमाथि छलफल सुरु
दक्षिण कोरियालाई पेनाल्टीले पन्छ्याएर स्वीडेन विजयी
विश्वकप डेब्यू म्याचमा पानामा खाली हात, बेल्जियमको सानदार जीत
फेसबुकबाट युवती जिस्क्याउने पक्राउ
५८३०० प्रति तोला
४९९८५ प्रति १० ग्राम
५८००० प्रति तोला
४९७३० प्रति १० ग्राम